सुरक्षा जुत्ता र जुत्ताका लागि प्रीमियम टेक्नोलोजी AIRTOX
द एक्सप्रेस range
यो Formula range
यो G-Force range
यो Gram range
यो McLaren range
यो Stingray range
यो TransAm range
AIRTOX-X- हान Kjøbenhavn
COOL&ME® एक उच्च उन्नत शीतलन प्रणाली हो। प्रणाली insole भित्र हावा परिसंचरण सुधार गर्न, र तापमान र आराम को नियमित गर्न डिजाइन गरीएको छ। एक अद्वितीय हेक्सागोनल माइक्रोचनेल निर्माणको कारण, पसिनाका थोपाहरू लगातार तपाईंको खुट्टाबाट टाढा सारिन्छ, वाष्पीकरण र तपाईंको खुट्टा सुक्खा राख्दै। उही समयमा, ताजा हावा सजिलैसँग ईन्सोलको माध्यमबाट जान सक्छ। COOL&ME® तपाईंको खुट्टा तातो र पसिना हुनबाट रोक्दछ तपाईंको जुत्ता लगाउँदा समग्र आराम बढाउन।
PowerBreeze® हाम्रो उच्च-टेक, सास फेब्रिक धेरैमा प्रयोग गरिएको छ Airtox उत्पादनहरू। यसको विपरीत COOL&ME® प्रणाली, PowerBreeze® जुत्ताको माथिल्लो भागमा स्थिर हवाको प्रवाहलाई अनुमति दिन प्रयोग गरिन्छ। यस microfabric जुत्ता लगाउँदा पसीना व्यवस्थापन र एक सुखद भावना कायम राख्न मद्दत गर्दछ। PowerBreeze® तपाईं राम्रो ताजापन को भावना संग छोड्नुभयो तपाईं राम्रो सास फेर्दछ प्रत्येक पटक जब तपाईं लगाउँछौं Airtox.
WHITELAYER® यो एक विश्वव्यापी सनसनी भन्दा कम छैन, र प्रयोग भएको छ Airtox सुरक्षा जुत्ता उद्योगमा पहिलो पटक। यो अनौंठो, गैर-धातुको फेब्रिक सुरक्षा एन्टो-पर्फोरेशन सामग्रीको सुरक्षा फुटवेयरको लागि क्रान्ति हो। यो एक अत्यन्त मजबूत, हल्का, नरम र अत्यधिक लचिलो फाइबर हो जुन बजारमा कुनै वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुँदैन। WHITELAYER® मूल रूपमा युएसमा अमेरिकी सेनाको एन्टिभेन्ट्रेशन पोशाकका लागि विकसित गरिएको थियो। त्यस बेला देखि, WHITELAYER® यसका लागि विशेष रूपमा विकसित गरिएको छ Airtox industries एक विरोधी छिद्र तहमा, यसको प्रकारको सब भन्दा बलियो।
यसले प्रत्येक वातावरणमा तपाईंको खुट्टाको लागि असाधारण उच्च स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्दछ। WHITELAYER® तपाईंलाई आन्दोलनको स्वतन्त्रता र उच्च सुविधा प्रदान गर्दछ। टेक्नोलोजीहरूको साथ जस्तै WHITELAYER® , Airtox नियमित प्रशिक्षकहरू र सुरक्षा जुत्ताहरू बिचको दूरी पार गर्न सक्षम भएको छ!
AQUA-CELL® हाम्रो एक प्रकारको द्वि-कम्पोनेन्ट झिल्ली हो जुन बनाउँछ AIRTOX सुरक्षा जुत्ता १००% वाटरप्रूफ। यो एकदम चरम मौसममा पनि राम्रोसँग काम गर्दछ, वर्षा र भिजेको कार्य अवस्थाबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। को AQUA-CELL® झिल्ली पनि सास फेर्न मिल्छ। फलस्वरूप, AQUA-CELL® तपाइँको खुट्टा सबै समयमा सुक्खा र ताजा राख्छ।
मिडसोलका लागि अल्ट्रासफ्ट झटका अवशोषक प्रविधि। कुशनिंग, ऊर्जा फिर्ता र एकैचोटि लचिलोपन। नियमित EVA सामग्री भन्दा धेरै नरम।
AIRTOX® - महाकाव्य डेनिश सुरक्षा जुत्ता भोलीको प्रविधिहरु संग प्याक। पेशेवर बजार को उच्च आराम र नदेखिने हल्कापन प्रदान गर्दै। डेनिश जुत्ता निर्माताको रूपमा, हामी सम्झौता गर्दैनौं!
हामीलाई पछ्याउन निश्चित गर्नुहोस्!
DK - २2830० Virum
+ 45 71994040 ११